Isasasa lemidlalo yeMayoral Cup
Isasasa lemidlalo Mayoral Cup
LIYAKHULA isasasa lemidlalo yaseMzumbe yaminyaka yonke eyaziwa nge-Mayoral Cup. Imidlalo yalo nyaka (2015) ibisezingeni eliphezulu kakhulu, njengoba abantu abasha bekhombise ikhono elimangalisayo emidlalweni eyehlukene. Kule midlalo bekuqhudelana ama-Cluster kanti bese kungumkhumulajezi, emuva kwemidlalo yama Wadi.
Lemidlalo yamanqamu idlalelwe ezinkundleni zemidlalo zaseMabheleni, kuWard-06. Abathandi bezemidlalo abebegcwele inkundla bakhombise enkulu injabulo, bethokozele ikhono elikhonjiswa abantu abasha, njengoba abafana namantombazane bebeshaya ibhola elinenkosi phakathi.
Ivula lemidlalo yamanqamu, iMeya yoMkhandlu, uKhansela Sydney Gumede uthe isifiso sabo njengoMkhandlu ukubona kukhula izinhlobo zemidlalo eyahlukene, abantu abasha baseMzumbe libakhokhele ikhono labo.
“Sijabule kakhulu ukubona abantu abasha bebamba iqhaza kwezemidlalo. Kodwa isifiso sethu esikhulu kakhulu ukuthi singaboni ibhola lezinyawo nelomnqakiswano minyaka yonke, sifisa ukuthi sibone nale midlalo ebeyaziwa njengeyabelungu idlalwa naseMzumbe. Sifisa abantu abasha bakwazi ukusebenzisa ikhono labo lezemidlalo ukushintsha izimpilo zabo ezemindeni yabo nemiphakathi abaphuma kuyo,” kubeka uMeya.
Emqhudelwaleni wabafana iqembu lePolar Stars liphume phambili lathola indebe kanye noR 5000. Iqembu lesibili lithole uR3000 kanye nejezi elisha. Iqembu eliphume isithathu lithole imali engama- R2000 kanye nezimedali. Lemidlalo yaqala emawadini yase iya kumaCluster, kwagcinwa ngomkhumulajezi.
Imenenja yehhovisi lokuthuthukiswa kwabantu abasha, okuyilona elihlela lemidlalo minyaka yonke, uMnu Philani Zama uthi izinga lizokhuphuka minyaka yonke ukuze ezemidlalo zilethe ushintsho emiphakathini.
“sesibonile ukuthi likhulu kakhulu ikhono lezemidlao eMzumbe namaphethelo. Abantu abasha bakhombisa ikhono eliyisimanga. Isifiso sethu kuleminyaka ezayo ukuthi sibe nochwepheshe abaphuma emaqenjini amakhulu abazokwazi ukuhlonza lamakhono, baphinde bathathe labo abenza kahle ukuze kukhule ikhono labo, ngelinye ilanga sibabone bemele izwe laseNingizimu Afrika kwezemidlalo,” kuphetha okaWosiyane.